Olona sivy novonoina tany fianjerana tany Suède nianjera
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Olona sivy novonoina tany fianjerana tany Suède nianjera
Jolay 14, 2019
Raha ny filazan'ny sampan-draharahan'ny vonjy taitra any Soeda dia olona sivy no maty tamin'ny fianjeran'ny fiaramanidina mpizahatany tany avaratra Soeda. Nampiasain'ny parachutista ilay fiaramanidina rehefa namely ny tany tokony ho 6 kilometatra atsimoatsinanan'ny Umeå izy, hoy ny tatitry ny media soedoà.
Ny fiaramanidina nianjera tokony ho tamin'ny 2 ora tolakandro teo an-toerana ary eo am-panadihadiana ny antony. The Fikambanan'ny parachute soedoà tamin'ny mpanao gazety ny zava-nitranga no ratsy indrindra amin'ny tantarany sy amin'ny fiaramanidina soedoà.
Horohoron-tany lehibe no namely ny toerana mafana an'ny mpizahatany any Indonezia
Horohoron-tany mahery vaika no mampihorohoro an'i Broome ny torapasika amoron-dranomasina Aostraliana